Iindaba-Umsebenzi wokuthintela ubhubhane kunye nolawulo awunakho ukukhululeka okomzuzwana！
Ukuphuhliswa kwesisifo kujongene nomngcipheko "wokudibanisa ezintathu kunye nokuma ngaphezulu"
Ukusukela ekuqaleni kobusika, ukukhula kobhubhane kuye kwajongana nomngcipheko "wokudibanisa ezintathu kunye nokuma ngaphezulu", imeko yothintelo nolawulo iye yabanzima nangakumbi kwaye inzima, kwaye imisebenzi inzima kwaye inzima.
Ubhubhane wehlabathi ubeka umngcipheko "wotshintsho oluthe chu" kunye "notshintsho". Imeko-bume yendalo ebusika iye yaba lukhenketho lwendalo olubandayo. I-coronavirus entsha inexesha elide lokusinda, umsebenzi wentsholongwane owomeleleyo, kunye nomngcipheko wokuhambisa onokubakho. Ukongeza, utshintsho lwentsholongwane lonyuse ukosuleleka kunye nokufihla, okukhokelela kuqhushumbe olupheleleyo lwesifo sesithathu seengubhubhane kwihlabathi liphela. Ukusukela ngoDisemba 2020, kuye kwakho ngaphezulu kwe-600,000 yamatyala aqinisekisiweyo kwihlabathi liphela, kwaye ngaphezulu kwe-10,000 yokufa okutsha, zombini ezo ziphakamileyo ezintsha ukusukela oko kwaqhambukayo.
Ubhubhane lwasekhaya lubeka emngciphekweni wokudibana kunye nokuxinana okwandayo kunye nezifo ezihlanganisiweyo zalapha. Ukusukela ngeyoMnga yowama-2020, amaphondo angama-20 axele amatyala amatsha angeniswe elizweni kunye nosulelo olungalindelekanga. Ukusukela nge-24: 00 nge-7 kaJanuwari, ngo-2021, ilizwe lam lisanda kuqinisekisa amatyala endawo angama-280, nalapho ayi-159 ebesandula ukongezwa kwiveki ephelileyo. Amatyala, ngakumbi uqhambuko lwamva nje kwiSixeko saseShijiazhuang, kwiPhondo laseHebei. Ukuvela kwezi meko kukhumbuza iphondo lethu ngomsebenzi wokuthintela nokulawula ubhubhane kwaye akunakuphumla.
Imeko yokuthintela ubhubhane kunye nolawulo lubonisa umngcipheko wokuhlangana kwabantu, ulungiselelo kunye nezithuthi. Iphondo lethu liphondo elinabantu abaninzi abaphuma ngaphandle. Inani labasebenzi abafudukayo kunye nabafundi beekholeji babalwa phakathi kwabahlanu abaphezulu kweli lizwe, kwaye uninzi lwabo luye kwi-Changzhumin engummelwane nakwezinye iindawo eziphambili zokuthintela ubhubhane kunye namazibuko okulawula. UMnyhadala weNtwasahlobo uyasondela, kwaye abafundi baya kuba neeholide kunye nabafuduki. Ngokubuya koosomashishini, kunye nexesha lokuhamba eliphambili labantu abavela kwezinye iindawo eJiangxi, umngcipheko ohlukeneyo kunye nezinto ezingaqinisekanga njengokuhamba kwabantu, iindibano kunye nohambo ziyadibana kwaye zibekwe phezulu, ezinokuthi zikhokelele ekusasazeni intsholongwane kunye neqela lesifo.
Gcwalisa ugonyo lwabantu abaphambili ngaphambi koMnyhadala weNtwasahlobo
Ubusika kunye nentwasahlobo lixesha elinzima kuthintelo kunye nokulawula ubhubhane. Iphondo lethu liwasebenzisa ngokungqongqo amanyathelo ahlukeneyo “okungenisa ukhuselo lwangaphandle, ukukhuselwa kwangaphakathi ngaphakathi”, kwaye ngobulumko, njengoko kwaqala, babamba ukuqina kunye nokuchaneka kokuthintela ubhubhane kunye nolawulo, kwaye iyaqhubeka nokudibanisa ubhubhane ophumelele nzima Uthintelo kunye neziphumo zolawulo.
Sebenzisa ngononophelo uthintelo kunye nolawulo lobhubhane wasebusika nasentwasahlobo. Ukusukela oko kuqala ubusika, iphondo lethu libambe iintlanganiso ezithile ezizodwa zokufunda nokuhambisa uthintelo nolawulo lobhubhane wasebusika nasentwasahlobo, ukulungelelanisa nokusombulula imiba ephambili, kunye nokukhuthaza amaziko okuyalela ephondo kuwo onke amanqanaba ukuba angene ngokukhawuleza kwilizwe lemfazwe. Ukusukela ngeyoMnga ngo-2020, iphondo lethu likhuphe ngokulandelelana izicwangciso ezingama-30 ezibandakanya ukuthintela nokulawula ubhubhane wasentwasahlobo, ugonyo, uvavanyo lwe-nucleic acid kunye nokwakhiwa kweklinikhi yomkhuhlane, oovimba bolondolozo lwezonyango, ukomba okungxamisekileyo, kunye nokomeleza ukuthintela ubhubhane kunye nolawulo ngexesha loSuku loNyaka oMtsha. kunye noMthendeleko weNtwasahlobo. Isicwangciso kukulwa ngokuthe ngqo nangokuzinzileyo ukuthintela kunye nolawulo ebusika nasentwasahlobo. Ngexesha loSuku loNyaka oMtsha, iphondo lethu lathumela amaqela alishumi elinambini okubeka iliso kwiindawo ezahlukeneyo zephondo ukuba ziye kwenza utyelelo oluvulekileyo nolungachazwanga ukuphelisa ngokuqinisekileyo iingozi ezifihlakeleyo zokuthintela nokulawula ubhubhane.
Ngokuhambelana ngokungqongqo nenkqubo edibeneyo yokuthintela kunye nolawulo lweBhunga likaRhulumente ekufakweni okumanyeneyo kogonyo olutsha lwe-coronavirus kubantu abaphambili, iphondo lethu lenze izicwangciso zomsebenzi okanye izicwangciso zokugonya, ukubeka esweni ngendlela engaqhelekanga, unyango lwezonyango, kunye nembuyekezo yeziphumo ezibi kakhulu, ukucacisa Amacandelo amabini Gxila kubemi abagonyiweyo. Udidi lokuqala ngabantu abasemngciphekweni omkhulu wosuleleko lunyumoniya omtsha, kubandakanya abantu abanomngcipheko ophezulu wokuchaphazeleka emsebenzini, njengokuvavanywa kwamasiko angaphambili kunye nokuvalelwa kwabasebenzi ababandakanyekayo kwizinto ezibandayo zangaphandle, ukulayishwa kwamazibuko nokukothula, ukuphatha, ukuhambisa nezinye Abasebenzi abanxulumene noko, abasebenzi bezothutho bamanye amazwe kunye nabasekhaya Abasebenzi, abasebenzi basezibuko lemida, abasebenzi bezonyango nabezempilo abajamelene nomngcipheko omkhulu wobhubhane waphesheya kwezilwandle; abantu abasemngciphekweni wokosuleleka kumazwe aphesheya, njengabo baya phesheya baye kusebenza okanye bafundele ishishini okanye iinjongo zabucala. Udidi lwesibini ngabasebenzi abakwizikhundla eziphambili eziqinisekisa ukusebenza koluntu, kubandakanya nocwangco ekuqinisekiseni intlalo, njengokukhuseleka koluntu, ukucima umlilo, abasebenzi basekuhlaleni, kunye nabasebenzi abanxulumene noko kwiiarhente zikarhulumente nakumaziko abonelela ngokuthe ngqo kuluntu; abo bagcina imveliso yesiqhelo kunye nokusebenza kokuhlala kwabasebenzi, njengamanzi, umbane, ukufudumeza, amalahle, abasebenzi abanxulumene negesi, njl. Abasebenzi beenkonzo zentlalo esisiseko, ezinje ngezothutho, ulungiselelo, ukhathalelo lwabantu abadala, ucoceko, umngcwabo, kunye nabasebenzi abanxulumene nonxibelelwano. Iphondo linophando olunzulu ngenani labantu abafuna ukugonywa kulo mjikelo wabantu abamalunga ne-1.6 yezigidi. Lo mjikelo wokugonya kweli phondo wasungulwa ngokusesikweni ngeyoMnga 28, 2020. Okwangoku, bebonke ngabantu abangama-381,400 abagonyiwe. Ukugonywa kwabantu abaphambili kuya kugqitywa ngaphambi koMnyhadala weNtwasahlobo.
Ngama-6 eephondo amanqanaba e-nucleic acid abhaqa amaqela angxamisekileyo asebenzayo
Kule mihla, kukho iiklinikhi zomkhuhlane ezingama-223 eziphumelele uhlolo kwiphondo, kwaye inqanaba lokugqitywa kolwakhiwo ngama-99.5%. Phakathi kwazo, inqanaba lokwamkelwa kweeklinikhi zomkhuhlane kwizibhedlele jikelele zemfundo ephezulu kunye nezibhedlele zezifo ezosulelayo yi-100%. Umthamo wephondo wokuvavanywa kwe-asidi ye-asidi unyuke waya kwi-338,000, kunye ne-6 kwinqanaba lephondo lokuvavanya amanqanaba eqela leenkonzo ezingxamisekileyo kunye neqela elinye lolawulo lomgangatho.
Ukongeza, iphondo lethu liza kwenza konke okusemandleni ukwenza umsebenzi olungileyo ekukhupheni nasekuvavanyeni i-coronavirus nucleic acid entsha yokutya okubandayo okuthengiswayo kwamanye amazwe, ukuze yonke ibhetshi kunye neqhekeza ngalinye lihlolwe. Qhubeka nokuphumeza amava axabisekileyo kwaye asebenzayo afunyenwe kwinqanaba lokuqala, qhubeka nokuphucula indlela yesiqhelo, qhubeka ukomeleza "imeko-bume yobuqu" kunye nokuthintela, qhubeka ukomeleza uthintelo lwamaqela kunye nolawulo lwamaqela, uqhubeke nokudibanisa isiseko sothintelo nolawulo, kwaye wenze zonke iinzame zokuthintela nokulawula ubhubhane wasebusika nasentwasahlobo.